गाई काट्न बाबुराम भट्टराईले सिकाएका हुन् : दिल निशानी
जसोतसो बिहानको छाक टारेपछि बेलुकीको चिन्ता हुने छेमु बिकलाई निमेकको भारीले कहिल्यै छाडेन। दुईजना कलिका नानिहरु श्रिमति, बा, आमा र आफूभन्दा साना ७ जना भाईहरुको बोझले थिचिएका छेमु बिकले आफ्नो सानो खरको झुपडि मुनि परिवारको साथमा केहि गाईहरु पालेका थिए। उनको घर जंगलको मुखमा थियो। गाँउमा पुजापाठ गरेर गाई दान पाएका पण्डितहरुले गाई लेक कटाउन सक्दैनथे, र तिनले त्यो गाई सित्तैमा छेमु बिकलाई छाडेर जान्थे। माटेबिसौनामा घासँपातको समस्या थिएन।
एक दिन मैले छेमु बिकलाई प्रहरिले हात बाँधेर लगिरहेको देखे। साँझ ५ बजेको हुनुपर्छ। म स्कुलबाट घर फर्किदै थिए। त्यस्तै १४ बर्षको हुदो हुँ म। छेमु बिकको पछाडि उनका कलिला नानिहरु र श्रमति रुदै-रुदै आईरहेका थिए। खालि खुट्टामा थिए उनिहरु। छेमु रुन्चे अनुहार लगाएर खलखलि पसिना छडेको थियो। प्रहरिले उनिहरुको घरको भाँडाकुडा, थाल, गिलास, बन्चरो, कोदलो पनि समातेको थियो। मैले सोचे-“सरकारले गरिबहरुको लागि घर दिएको हुनुपर्छ। छेमुको दुखका दिन गयो अब, यिनिहरुले बसाई सरेछन्।”
घर पुगेपछि हल्लाखल्ला सुने-छेमु बिकलाई गाई काटेर खाएको आरोपमा प्रहरिले समातेर लग्यो। सिङ्गो गाँउ नै डराएको थियो। जनजाति र दलितहरुको बाहुल्यता भएको गाँउमा यसभन्दा अगाडि गाईको मासु नखाएका त कोहि थिएनन् तर तिनले खुलम्खुल्ला काटेर खाँदैनथे। भिरबाट पल्टेर मरेका, जंगलमा बाघले मारेका गाई खान्थे। छेमुले खाएको गाईको मासु पनि बाघले चिथोरेर मारेको रहेछ। किनभने गाई मरेको ठाउँमा गाई र बाघको धेरै समय लडाई भएको प्रमाण देखिन्थ्यो। बाघका खुट्टाका निशान थिए, रौँ हरु झरेका थिए।
गाँउका धेरै मानिसहरु, छेमुका छेमिकिहरुले गाई बाघले मारेको बताएपछी म गाउँका ठुला कुल घरान तथा जान्ने मान्ने भनिएकाहरुको घरमा पुगे। प्रहरी,नियम, कानुन उनिहरुले चलाउथे। गाँउमा कस्लाई ठिक पार्ने नपार्ने हाम्रो हातमा छ भन्थे उनिहरु। मैले भने, ‘हेर्नुहोस् बडाबा, छेमु बिक माथि ठुलो अन्याय भएको छ। उसले बाघले मारेको गाईको मासु खाएको रहेछ। विचरा गरिब मान्छे, खयो त के बिरायो। प्रहरिले समातेर लगेका छन्। उसले निमेक गरेर-जतनले कमाएर बालबच्चा, बा, आमा भाईहरु पालेको छ।’ बडाबा, केहि बोलेनन्।
मैले थपे, “छेमु जेल गयो भने विचरा नानिहरुको हालत के हुन्छ? तपाईले ईलका प्रहरिलाई भनेर यो केश जिल्ला नपुराउन भन्न पर्यो। जिल्ला पुग्यो भने बर्बाद हुन्छ। तपाईले भनेको मान्छन्। छेमु यहि गाँउमा जन्मियो, हुर्कियो। उ गरिब हुनुमा हाम्रो पनि हात छ। गाई पालेर के गर्ने, उसले पालेको गाईको दुध घिउ हामिले किनेनम्। प्रहरिहरु बाघले गाई मारेको ठाउँमा गएकै छैनन्। मासु पकाएको भाँडा र खाएको थाल उठाएका छन्। अदालतमा यो मात्र प्रमाण कसरि होला र?”
अचानक बडाबा बोले, तर श्लोकमा:
बडा बाको श्लोक बुझ्न नसकेपछी सवाल-जवाफ गर्ने कुरा आएन। फेरी उनि बोल्ने मुडमा थिएनन्। हाम्रो जिजु बाजेलाई अहिले मैले लेखिरहेको भाषा बोल्न त मुस्किल थियो। यद्दपि हिज्जे मिलाएर लेख्न, बोल्न मलाई पनि समस्या छ। यो हिन्दि आर्य संस्कृतिक रुपान्तरित खष भाषाको विस्तार नेपाली भाषाको रुपमा उदाउनु भन्दा पहिला नेपाली माटोमा बोलिने भाषा हाम्रो जिजु बाजेको थियो। मैले सोचे बडा बाले कविताको लयमा मानव हितका, धर्मकर्मका केहि गाँठि कुरा भनेका होलान्।
अन्तत; छेमु बिक ६ बर्षको लागी जेल चलान भयो। त्यसपछी जनयुद्ध सुरु भयो।
माओवादी लडाईको सरुवातकालमा खासगरी शामन्तिहरुलाई कारबाही गर्ने नाममा धेरै मानिसहरु मारिए। ति सोझा थिए वा शामान्ति, तिनलाई गरिएको भौतिक सफाया न्यायिक थियो वा थिएन, त्यता बहस नगरौ। तर एक किसिमको जगजगी थियो। छेमु बिकका भाईहरु माओवादीमा प्रवेश गरे। जनमुक्ति सेना (लडाकु) बने। माओवादीको सबैभन्दा धेरै प्रभाव र विस्थापित हरुनेहरुको एक आपसमा मर्ने, मार्नेहरुको क्षेत्र नै त्यहि बन्यो। छेमुका १ भाई भविलाल बिकलाई तत्कालिन शाही सैनिकले मार्यो।
तर एउटा कुरामा भने हाईसन्चो भयो। माओबादीको प्रभाव रहेका देशका सबै ठाउमा काई काटेर खाने कुरा हाँस र कुखुरा कटेर खाए बराबर भयो। खुल्ला रुपमा गाई काटेर खाने चलन माओबादीको उदय पश्चात भयो। गाँउलेहरुले लुकिचोरी हैन हाक्काहाक्की गाई खान थले। तिनले स्कुल र खुला चौरमा गाई काट्न थाले। कुनैबेला त १५ ओटा सम्म गाई काटिन थाल्यो। माओवादीको हुलजत्था धेरै हुन्थ्यो, एउटा कुखुरा, बोका काटेर एक छेउ नि नपुग्ने। दुधालु भैसी काट्ने कुरा आएन। गाई र गोरु नै धेरै काटियो।
के बाहुन, के पण्डितको छोरा, के मगर के दलित शाकाहारी बाहेक गाईको मासु नखाने माओवादी कोही भएन। पहिले गाईदानमा पाएको गाई छेमु बिकलाई दिन्थे, विस्तारै त्यो गाई माओवादीलाई दिन थाले। गाई गोरु बुढो भयो वा घाँसको दुख भयो भने माओवादीको नाममा ति गाईहरु समर्पित हुन थाल्यो। मेरा बा! एक जगाको लडाईको बेलामा कम्तिमा १०० ओटा गाई गोरु काटिन्थे। ठुला, ठुला भाँडाहरुमा गाईको मासु लस्करै हुन्थ्यो। नखाने को होला? सबैले निकै मिठो मानि-मानि खान्थे।
गाई काटेर मासु खानेहरु सबै हतियारको साथमा हुन्थे। जिन्बावाद, मुर्दाबाद मात्र हैन। उ बेला गोलि नै हानाहान। छेमु बिकलाई जेल पठाउने ईलका प्रहरी कार्यलय नै कब्जामा- रामरामरामराम। ठुलो जगजगी भयो। खुला रुपमा गाई काटेर खानुपर्छ भनेर माओवादीले सिकायो, माओवादीले आदेश दियो, माओवादीले गाई गोरु दर्शन बाँड्यो। जति सकिन्छ खाए हुन्छ भन्यो। प्रहरी र सुराकिहरुको आँखा छलेर लुकिछिपी गाईको मसु खाने जनजाति दलितहरु लागि त महा उत्सव नै आयो।
अहिले माओवादी सरकारमा छ। गृह मन्त्री गाईखाने राम बहादुर थापा बादल नै छन्। संविधान निर्माणको माओवादीले नै पहलकदमी लियो। गाई काट्न र गाईको मासु खान नि माओवादीले सिकायो। तर आज किन गाईको मासु खाँदा जेल? अझै नि गणतन्त्र आएन? गाई गोरु काट्न किन सिकाएको माओवादीले? अरुले काटेर दिएको मासु खाँदा नि जेल, मरेको गाई खाँदा नि जेल? आखिर किन? किन यस्तो अन्याय? संमरण रहोस्- बिषय मासुको हैन, बिभेदकारी कानुनको हो।
जनतालाई खुला रुपमा गाई काट्न लगाउनुमा तत्कालिण माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको समेत ठुलो हात छ। नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद भएको र, यसको मुल जग खस आर्यहरु भएको उनको कथन थियो। हिन्दू अहंकारबादी, ब्रमाहणबादी, मनुस्मृतिका चेलाहरुले नेपालमा विभेद बढाएको र यसको अन्त्य नभए सम्म नेपालमा विकाशको कुनै संभावना नभएका राजनैतिक प्रतिवेदनहरु बाबुरामकै हो। यसर्थ, खुला रुपमा गाई काट्नु भन्ने उनको आदेश हुन्थ्यो।
पक्कै पनि युद्धको समयमा खानपीन तथा बनदोबस्तिका समानहरुको अभाव हुन्छ नै। यो अभावलाई चिर्नको लागि बाबुरामले २०२४ सलमा सर्वप्रथम खुला रुपमा गाई काटेर खाने निति ल्याए। त्यो भन्दा अगाडि पनि माओवादी र जनजातिहरुले गाई नखाएका त हैनन् तर नितिगत थिएन। बाबुरामले निति बसाले। बाहुनको छोरो, पढ्न भारत बसेको। गाई काटेर खानु भन्ने आदेश पक्कै पनि एक किसिमको साहसिक कदम थियो। उनले यो निति ल्याउनका पछाडी केहि कारण छन्।
पहिलो कारण; रोल्पा रुकुम जस्तो जनजातिको बाहुल्य क्षेत्रबाट युद्ध संचालन गर्नको लागि चुतर दिमाग आवश्यक पर्दैन। बाबुरामहरुले उ बेला नै भनेका थिए- जाँड, रक्सि खाएर झै झझगा हुने गाउँमा हामिले राजनैतिक चेतना भरिदिनुपर्छ, युद्ध त्यसै जितिन्छ। तर रक्सिको सितन के हो? हो गाईगोरुको मासु हो। किनभने गाईगोरुको मासु खाँदा जेलनेल परेका जनजातिहरुलाई पिडाको घाउमा मलम लगाउन यहि गाईगोरु काटेर खान लगाउनुपर्छँ भन्ने बाबुराम ”मांसाहारि विचारधाराले´स्थान पायो।
दोश्रो र अन्ततिम कारण हो, हिन्दुवादी राज्य सत्ता। कथित बिष्णु भगवानकका अवतार तत्कालिन राजाहरु नेपालमा शासन गरिरहेका थिए। एमाले, कांङ्रेस केवल दरबार भजाएर परिवार पालेको निम्छरो पार्टि न थियो। राजालाई हिन्दुवादी शक्तिहरुको भरपुर हात थियो। रेडियो नेपालमा हिन्दुको भजन मात्र बज्थ्यो। बहु धार्मिक देशमा यो अन्यायपुर्ण थियो। बाबुरामको टसल राजा र हिन्दुबादीहरु संग पनि थियो। किनभने यदि राजा रहन्छन् भने केवल त्यो हिन्दुबादी शक्तिको समर्थनमा रहन्छन्, एमले काङ्रेसले टिकाउन सक्दैन भन्ने थाहा थियो बाबुरामलाई।
भटाभट गाई काटेर खाने निति ल्याए बाबुरामले। रोल्पा रुकुमले आफ्नो पहिचान पायो। अन्य जनजातिहरु शेर्पा, राई, लिम्बु, पश्चिमका खाम भाषीका मगरहरु, तामाङ्हरु पनि बाबुरामको नितिले निकै खुसी बने। राज्यबाट दुख पाएका जनजातिहरुको लागि डा. बाबुराम देउतै बने। उतिखेर गाईगोरुको मासु सर्वसुलभ जस्तो भयो। बिनाकुनै डर रोकतोक गाईगोरुको मासु खान चाहानेहरुले खान सक्ने समानन्तर सत्ताको नयाँ नेपाल बन्यो। वास्तवमा यो न्यायपुर्ण थियो किनभने गाईको मासु बहु जातिय समावेशि नेपालको एक प्रतिक थियो।
गणतन्त्र आयो। नयाँ संविधान बन्यो। बुबुराम र प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्रि बने। मन्त्रि र संसद, सांसद औलामा गन्न नसक्ने भए। यो बिचमा माओबादि युद्ध आन्दोलनले के पायो ? के गुमायो ? त्यो अल्गगै चर्चा गरौला। तर उत्पिडित जनजातिहरुको लागि खासै न्यायिक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन। हिजो यिनैले गाईको मासु काटेरै खुला ठाउँमा खान सिकाए। मुला आज यिनैको सरकारले भटाभट जेल हालिरहेको छ। भिरबाट पल्टेर मरेको गाईको मासु खाँदा सोझो तामाङ जेल परेको छ, यि मुला चुपचाप बसेका छन्। ए बाबुराम तिमिलाई लाज लाग्दैन? ट्विटरमा ट्यटरट्यटर गरको छ बसेको छ। बेकार।
बाबुरामले आदिवासी समुदायहरु संग क्षमा माग्नुपर्छ वा साथ दिनुपर्छ। यता न उताको कुरा गरेर आखिरिमा ब्रमाहणबादलाई नै टेवा पुराउने कदम चाल्न हुदैन। हैन भने यो भुमिको बन, जंगल, माटो धुङ्गाको साथमा हजारौ बर्ष देखि बस्दै आएका रहेका आदिवासी जनजातिहरुले नयाँ नेपालको अनुभुति कसरी गर्ने? समावेशि नेपालको छायाँ कहाँ छ? जनजातिहरुलाई दमन भएकै हो नि? यदि हैन भने त देशको उन्नति समग्रतामा देखिने थियो नि हैन? उन्नति कुनै एक खास वर्ग, जाति समुदाय बिशेषको सवाल हो र? बहु-जातिय, बहु धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक देश भनेको के हो? सबैको समान अस्तित्व, ईतिहाँस र पहिचान भनेको हैन?
गाईको मासु खान हुने कि नहुने?
पछिल्लो समयमा गाईको मासु प्रकरण सामाजिक संजाल र केहि मिडियाहरुमा चर्को रुपमा बहस भयो। लोकतान्त्रिक व्याबस्थामा विचार, बहस हुनु स्वभावीक छ। तर जनजातिहरुको गाईको मासु खान पाउनुपर्ने चाहनालाई ईयु (युरोपियन युनियन) संग जोडेर हेर्नु निकै हाँस्यास्पद हो। कतिपयले यसलाई कृस्चियन धर्म संग पनि जोडेर हेरेका छन्, त्यो झन् सबैभन्दा ठुलो हाँस्यास्पद बिषय हो। कतिपयले नेपालको पहिचान, अस्तित्व र धर्मलाई समाप्त पार्ने खेलको रुपमा व्याख्या गरेका छन्, यो त झन् निकै ठुलो हाँस्यास्पद कुरा हो।
नेपालको पहिचान के हो? जहिल्यै पनि जातिय सद्भावको ठेक्का जनजातिहरुले मात्रै लिनुपर्ने? अरुले जातिय सद्भावको बारेमा चिन्तै गर्न नपर्ने त्यस्तो रेडिमेड जिनिस हगि? यो समाज मिलेर बसेको हो कि अनेक पिडाहरु सहेर बसेको हो? किनभने मिलेर बस्ने भन्ने कुरा सहेर बस्ने संग पनि जोडिएको छ। अन्याय, अत्याचर, विभेद, उत्पिडन सहेर चुपचाप बस्दा पनि समाज मिलेर बसेको देखिन्छ। कस्तो खालको समाजिक सद्भाव हो यो? कस्तो खालको मिलेर बसेको देश हो यो ?
हेर्नुहोस्, कुरा के हो भने जानजातिहरु, खासगरी शेर्पा, तामाङ्, राई, लिम्बु र पश्चिमका खाम भाषी मगरहरुले यो भुमिमा गाईको मासु खाँदा युरोपियन युनियनको त के अमेरिका भन्ने देश पनि जन्म भएको थिएन। यि जातिका पुर्खाहरुले कृश्चियन भन्ने के हो नाम पनि सुनेका थिएनन्। अब गाई खाँदा यिनिहरुको हातमा डलर आउने भए एनजिओ, आईएनजिओ किन ब्रमाहणबदीहरुको हातमा हुने थियो? सबैभन्दा धेरै कृश्चियन र पादरी त यिनै बनेका छन्। युरोप तिर अनुसान्धन गर्नुहोस् त!
अर्को कुरा आदिवासीहरुले ईयुको चाहना अनुसार चल्यो पनि भनेका छन्। ईयु को हो र? आदिवासिहरु उसको चाहना अनुसार चल्ने? ईयुलाई नेपाल बोलाएर निर्वाचनको परिवेक्षण गर्न त सरकारले नै बोलाएको हैन र? एनजिओ आईएनजिओलाई नेपालमा काम गर्न अनुमति दिने को हो? सरकार हो कि मन्दिर पस्न नपाएको दलित हो? । अनि सबैकुरा आफुहरु अनुकुल हुदै गयो भने ‘स्वागत योग्य’ अनुकुल बाहिर गयो भने ‘डलर खायो’ । कहाँको डलर खायो? कस्तो हुन्छ डलरको मुख? मुलुकलाई अति कम विकशिल देशको सुचिबाट हटाउन नमान्ने को हो? किन नमानेको हो? ईयुले हेप्यो भन्न लाज लाग्दैन?
बहु जातिय, बहु धार्मिक राज्य हो, गाई खानले खान्छ, नखाने चुपचाप बसे हुछ। भारत पनि हिन्दु देश हो। गाई खाएकै छन्। दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै गाईको मासु भारत नै बेच्छ। सिक्किम, दार्जिलिङ् तिर सडक मै गाईगोरुको मासु बेच्न राखिएको हुन्छ। नेपालमा कासैको आगनमा लगेर गाई काटिएको त छैन। पक्कै पनि संवेदनशिलता हेरेरै गाईगोरुको मासु खान्छन्। पुर्व तिर किराँतहरुले खाईरहेकै छन्। उनिहरुले पुजा गर्दा गाईको टाउको चढाउनु पर्छ। तिनको पहिचान “संस्कृति” नै होइन त?
अनि किन गरिबहरुलाई सुराकी गरेर जेल हाल्नु परेको? सबैको आ, आफ्नो धर्म संस्कृति हुन्छ। उनिहरुलाई आफ्नो पुर्खाले गरेको, खाएको चिज गर्न, खान अधिकार छ। नत्र गणतन्त्र ल्याएको के काम? पंचायत, राणा र राजाको हुकुमि शासन ल्याय भैहाल्यो नि। अहिले गाईको मासु खाँदा जेल हाल्ने जुन नेपालको कानुन छ, त्यसलाई संसोधन गरौ। राष्ट्रिय जनवार परिवर्तन गरौ। जुन जनवारको मासु खाँदा बहुसङ्ख्यक जनताहरु जेल पर्छन् भने त्यो जनवार अराष्ट्रिय हुन्छ।
कतिपयको तर्क छ, राष्ट्रिय जनावर किन खाएको? तर नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय जनवार खान नहुने लेखिएको छैन। अन्य धेरै देशमा राष्ट्रिय जनवार खान्छन्। जस्तो कि अष्ट्रेलियामा कंगारुको मासु मज्जाले खान्छन्। रकमि र पातकि कुरा त निकै लामो गर्न सकिएला तर हामिले जब समान अधिकार र समावेशि नेपालको कुरा गर्छौ त्यहाँ कुनै धर्म र जातको हैकम चल्दैन। जे हुन्छ बराबर हुन्छ। न्याययिक वितरण हुन्छ। हामिले पढेको समाजवाद, साम्यवाद र पुँजिवादको मर्म समेत यहि हो।
बहुसंख्यक जनताहरुले खाने जनावर गाई नै किन राष्ट्रिय जनवार हुन पर्यो त? लोप उन्मुख गैँडालाई राष्ट्रिय जनवार राखे के हुन्छ? हो राधिका तामाङ् र गगन थापाहरु विवादमा पर्छन्। जनताहरुको बुझाईमा एकरुपता हुदैन। अनि लडाई सुरु हुन्छ। राधिका तामाङले त्यस्तो केहि भनेकि होइनन् विचरा। तिनले मरेको गाईको मासु खाँदा पक्राउ परेका सोझा गाँउले तामाङ्लाई छोड्नका लागि जनतालाई गाई काटेर खान सिकाउने अर्का माओबादि मनुष्य हालका गृह मन्त्रि राम बहादुर थापा बादललाई ग्यापन पत्र बुझाएकि मात्र हुन्। आफ्नो अपहेलित, दमित समुदायको लागि त्यति काम नगरे राधिका तामाङ कसरि नेतृ? www.dilnisani.com बाट साभार गरिएको ।
प्रकाशित मिती २०७४ चैत १८ गते